कुकुरले किन खुला ठाउँमा से’क्स गर्छ? यस्तो पो रहेछ कारण ? - jagritikhabar.com
कुकुरले किन खुला ठाउँमा से’क्स गर्छ? यस्तो पो रहेछ कारण ?
यो कुरालाई लिएर भी म र अर्जुनबीच भ नाभन पनि हुन्छ । भीम महाभारतका अत्यन्त रिसा हा पात्र थिए । उनले अर्जुनसँग ख राउ राख्ने सर्तका बारेमा बहस गर्छन् तर अर्जुन बिन्ति गर्छन् ‘हे भ्रा ता श्री बाहिर हजुरका चरणआशन देखेको भए यस्तो अनर्थ हुने थिएन, क्ष मा चाहन्छु, परन्तू पादुका ढोकामा छैनन् ।